DEG DEG+DAAWO: Odayaasha Beelaha HAWIYE oo Go’aan halis ah ku dhawaaqaya & Shirar ka socda Muqdisho
May 19, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 10
Dhaq-dhaqaaq nuuciisa kii ugu horreeyay muddo ka badan 10 sano ayaa ka curtay magaalada Muqdisho, kaas oo ah in hogaanka dhaqanka ay qaataan go’aano ka dhan ah Dowladda dalka maamusha waxaana xaalad aan looga baran sanadihii dambe.
Laba jeer kulamo loo dhanyahay ayey ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxaana ka sii horreeyay kulamo kale oo gaar gaar ahaa kuwaas oo dhamaantood la qabtay 3-dii bil ee ugu dambeysay.
Dhamaan kulamaan waxay ku saleesnaayeen cabasho ay ka qabaan 3 qodob oo ah dhib ka jira magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay sababtay dowladda Soomaaliya islamarkaana la sheegay in ay ka diiday odayaasha in ay waan-waan kala gasho.
Hawiye futo madoobe , wuu xanaaqay
Adigu futadaada ma cadahay?
I mean mubarak yusuf
Mabruka Yusuf waa haweenay Majeerteenka ka heshay
Hawiye waa soo dhoweyey lakiin ismoog halkii Bay ka bilawday
Mubarik Yuusuf ma Lagaroone ayaad tahay? Maxaad raga futadooda uga hadashaa?
Midda kale Hawiye futo madoobe meesha uu ka yimid iyo micnaha ka dambeeya ma garaneysaa? KKKKK
Hawiye futo madoobe waxaa laga wadaa Hawiye Gus weyne. Ma fahantay? Sheekada sida eey u dhacdayna waa kan:
Hawiye rag uma tago ee futadiisa waxaa ka soo warbixiyay NAAG.
Naag la soo seexatay nin Hawiye ah ayaa naago kale weydiiyeen ka waran oo warbixin naga sii ninkii Hawiye.
Naagtii ayadoo gooska dambe muuqda oo indhahana isku qabatay ayeey ku jawaabtay “Alla Hawiyaha futo madoobaa”.
Naagihii hadalka wey fahmeen in uu sarbeeb ahaa sababtoo ah meesha waxaa maraayay rag reerahooda ah.
Marka rag oo doqomo ah hadalka nuxirkiisa fahmin ayaa hadalkii dumarka meeshaan wad wada. KKKK
Bal naag ha dhahdo Hawiye futo madoobaa sababtoo ah ayada waa loo ogol yahay in eey futada soo aragto.
Laakiin raga ka hadlaayo rag kale futadoo maxaa hayo. Ma Khaniisyaal iyo Lagaroonayaal miyaa? KKKKK
Mubarik Yuusufoow hadii aadan hadalka micnaha ka dambeeya aqoonin waakaas waan kuu micneyay oo iska jir waxii hadda ka dambeeya soo hadal qaadintiisa.
Hadii kale Lagaroone adiga uguma horeysid.
Hadii aad u dhalatay Issaq annaga daraadaad magaca Issaq iyo Qabiilkaba xumaato uma quurno.
Waxaba hayes caayin,was bil ramadaane ,alla ka baqa oo joojiya taageerada qabiilka, oo taageera diintii illahay ina siiyey.somaalinaanaha kala tagimeeyeeno ,dhulkaan WADA degenaaneenaa San isaaxin.
Ku: Mubarik Yusuf.
Hadalka “Hawiye futo madoobe, wuu xanaaqay” ma farxad baa kaa keentay oo Hawiye xanaaqay waxaad u sugeysay sida bil dhalatay oo Daarood iskama celin kartid Hawiye la’aantiisa.
18 May iyo Hawiye xanaaqay waxaay idiin tahay farxad labba jibbaaran. KKKKKK
Daarood waxuu marwalba ku fikiraa in uu idin tumo laakiin usha la idin ku tumi lahaa waxaa gacanta ku hayo Hawiye.
Marka iska qeyqeyliya iska damaashaada usha la’idin ku tumi lahaa marnaba uma soo dhiibeyno Daarood. KKKKKKK
Qabiil caygu ma fiicna ee xaal ka bixi arintaas.
Meel kore ayaan arkayay qaar qolodaada ku weydiinaya kolkaasaan kaa difaaca, show qadafkaagan bey dabo socdeen.
Caydu sideedadaba ma qumana Mubaarikow. Bill Ramadaana weynu ku jirnaa ee arintaas ogaoonow.
War Abgaalow nimankaan Hawiye Hawiye ku jira oo idinku habarkacsanaaya ka ceyriya degaankiina wad xusuusataan ayagoo qaawan inuu Caydiid ciidan ahaan u soo kaxaysay asuu idinku xasuuqay. Ar kuwaan waa soo wada guureene iha u daymo la’aanina